Esi eweputa nseta ihuenyo na Mac | Nzukọ Ekwentị
Enwere ngwaọrụ ole na ole bara uru karịa ijide ihuenyo, ihe doro anya na ọ bụ ihe a na-ahụkarị na Smartphone mgbe ị na-anwa ịkọwa ihe anyị ji otu onyonyo. Ọ dị mma, na macOS ọ dị mfe dịka ọ dị na ama ọ bụla, a mfe Nchikota igodo anyị keyboard ga-eduga anyị na anyị ijide n'etiti nke e nwere ọtụtụ ụdị. On Windows keyboards e nwere ebipụta na ihuenyo na-eme ka ọ ọbụna mfe.
Ime nke a na macOS abughi oru siri ikeỌ bụ naanị na ọ bụrụ na anyị etinye oge dị ukwuu na-ejighị ya, anyị nwere ike ichefu ya, ebe ọ bụ na nchikota isi dị mkpa iji mezuo njide ahụ. Enwere ọtụtụ ụzọ iji nweta nseta ihuenyo na macOS ma onye ọ bụla nwere ike ijere anyị ozi dabere na ọnọdụ ahụ ma ọ bụ mkpa. N’isiokwu a anyị ga-egosi ụdị ihe dị na otu esi eme ha.
1 Weghara ụdị na ihe iwu iji
1.1 Nweta ihuenyo zuru ezu
1.2 Seta naanị otu akụkụ ihuenyo
1.3 Seta naanị otu mpio
1.4 Jiri marquee ihuenyo
2 Weghara idezi
2.2 FotoScape X
Weghara ụdị na ihe iwu iji
Iwu keyboard bụ ụzọ kachasị mfe iji nweta nseta ihuenyo, ọ dị mfe ma ọ bụrụ na anyị na-ewere ha oge niile, anyị agaghị echefu ha, mana ọ nwere ike ịchefu ma ọ bụrụ na ị nọrọ ogologo oge na-ejighị ya. Site na njide zuru ezu iji weghara windo ma ọ bụ otu mpaghara. Achọpụta ndị a emere ga-echekwa na desktọọpụ anyị mana enwekwara iwu idetuo ya na kiiboodu anyị.
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ mee ndekọ ihuenyo site na iji vidiyo, ma obu maka ihe ngosi ma obu dekọọ udiri ọdịnaya, nwa mgbe gara aga anyi mere edemede ebe anyi gosiri etu esi eme ya.
Nweta ihuenyo zuru ezu
Usoro 1: anyị pịa igodo Mgbanwe + Iwu + 3 n'out oge na ijido ihuenyo niile ka a ga-azọpụta na desktọọpụ anyị.
Usoro 2: anyị pịa igodo Mgbanwe + Iwu + 3 + Control na chekwaa njide na clipboard.
Ọ bụrụ na anyị nwere MacOS Catalina Mgbe ị na-eme ụdị njide a, nhụchalụ nke njide ga-apụta na akuku na obere igbe. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ngwa ngwa ngwa ngwa ụfọdụ edezi.
Seta naanị otu akụkụ ihuenyo
Usoro 1: anyị n'otu oge pịa igodo Mgbanwe + Iwu + 4. Obe ga-apụta na pointer pointer, jiri pointer iji họrọ ebe anyị chọrọ ijide, ozugbo ị hapụrụ òké pịa njide ahụ ga-echekwa na desktọọpụ anyị.
Usoro 2: anyị pịa oge a Mgbanwe + Iwu + 4 + Control. N'ụzọ dị otu a, ozigbo anyị họrọ ebe ahụ, a ga-echekwa ya na clipboard anyị.
Seta naanị otu mpio
Anyị ga-ebu ụzọ jiri nchịkọta isi, Mgbanwe + Iwu + 4 nke mere na onye na-ako anyi wee buru obe. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ zọpụta ya na clipboard anyi ga-ejikwa igodo njikwa na iwu isi.
Ugbu a, anyị pịa ogwe ohere ya mere na pointer anyi buru igwefoto.
Ugbu a windo niile nke anyị gafere pointer dị ga-apụ apụ na-acha anụnụ anụnụ. Nke a ga - egosi na windo ndị ahụ ga - abụ akụkụ nke nseta ihuenyo gị.
Usoro a na mgbakwunye na ịchekwa windo nwekwara ike ịchekwa desktọpụ, menu Ogwe ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ mmiri. A ga-echekwa ihe oyiyi ahụ usoro png na obere mkpuchi, ọ bụrụ na anyị achọghị shading a, anyị na-edebe igodo nhọrọ mgbe anyị na-pịa ịchekwa ihe oyiyi.
Jiri marquee ihuenyo
Ọ bụrụ na ụdị nke macOS anyị bụ Mojave ma ọ bụ karịa, Anyị nwere ike ibu marquee na ihuenyo ị nwere ike ịmegharị ma ọ bụ gbanwee. Anyị nwere ngwaọrụ atọ ijide, nhọrọ ịchekwa, gosi pointer, na ndị ọzọ.
Anyị na-pịa igodo Mgbanwe + Iwu + 5 ịhọrọ ihe anyị chọrọ ijide, ọ bụrụ ihuenyo zuru oke, windo ma ọ bụ igbe akọwapụtara. A ga-echekwa njide ahụ na desktọọpụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchekwa ya na clipboard anyị ga-agbakwunye igodo njikwa na nchikota isi.
Mgbe ịmechara njide anyị nwere ike idezi ya, anyị nwere ọtụtụ mmemme anyị nwere maka nhazi ihe oyiyi, anyị ga-akpọ aha 2 dị ezigbo mkpa ma nwee ọtụtụ ngwaọrụ.
Pixelmator bụ onye nchịkọta ihe oyiyi dị ike, mara mma ma dịkwa mfe iji. N'ebe ọwụwa anyanwụ Mmemme bụ naanị maka Apple ilekota. A kwadebere ya n'ọtụtụ ngwaọrụ edezi, na-enye anyị ohere abụọ dezie foto anyị, otu esi emepụta ihe, see, tee ma ọ bụ tinye mmetụta foto anyị.
Enwere ike ibudata mmemme a site na Apple Store nke macOS ma nwee ọnụ ahịa a 32,99O nwere ike iyi ihe dị oke ọnụ, mana ọ bụ ikikere ndụ niile, yabụ ị ga-akwụ ụgwọ naanị otu ugboro na ị ga-enwe nsụgharị nke a na-emelite mgbe niile na ọtụtụ mmelite. Anyị nwekwara ike ịchọta Versiondị pro maka € 43,99, ọ na-agụnye nhọrọ ole na ole ọzọ na ntanetị ọkachamara ọkachamara.
Ihe nchịkọta akụkọ ihe oyiyi dị mfe ma dị irè nke na-enye anyị ohere ịhazi ihe oyiyi ọ bụla iji melite ya ma ọ bụ mezie ezughị okè ọ bụla n'ụzọ dị mfe. Ọbụna nso nso Pixelmator, ma ọ na-enye ọtụtụ ọrụ kwe ka onye ọrụ ọ bụla mee ha, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ maghị edezi na ịgwọ ihe oyiyi.
Echiche banyere onye ndezi a dị mma nke ọma na ọ so n'etiti ndị kacha baa uru na Storelọ ahịa ahụ, ọ bụ kpamkpam enwerela onwe ya ya mere nrụnye ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu ma ọ bụrụ na anyị achọghị imefu ihe ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Mac » Esi eweputa nseta ihuenyo na Mac
Otu esi esure ISO na USB n’ụzọ dị mfe
Esi mara ma enwere m nje na iPhone na otu esi ewepụ ya